Miaraka amin'ny fikarohana, ny toerana faharoa no voalohany very voalohany. Martech Zone
Sabotsy 7 Novambra 2009 Sabotsy 7 Novambra 2009 Douglas Karr
Ny olona sasany dia tena faly rehefa manomboka mahita ny pejiny manomboka miseho amin'ny valin'ny motera fikarohana. Betsaka ny orinasa no tsy mahatsapa hoe tena lehibe tokoa ny lalao ary ohatrinona ny vola atokana hiresahana ny filaharan'ny teny lakile sy ny sandan'ny fametrahana ny motera fikarohana.
Ka… ity misy ohatra iray ahafahako manisa ny sandan'ny laharana. Andao alao sary an-tsaina hoe Agent any Real Estate San Jose isika ary manana bilaogy tsara sy fampielezam-barotra amin'ny milina fikarohana izay mitondra antsika hiakatra ho an'ilay fe-potoana Trano amidy any San Jose.
Tamin'ny volana lasa dia nisy 135,000 ny karoka Trano amidy any San Jose.
Ny vidin'ny trano anelanelan'ny trano amidy dia $ 544,000 any San Jose.
Ny komisiona momba ny trano dia eo anelanelan'ny 3% sy 6%, ka alao sary an-tsaina ny tahan'ny kaomisiona 4%.
Andao alao sary an-tsaina izao fa 0.1% amin'ny mpikaroka ihany no nahatonga ny varotra tena izy.
SEO Mpikaroka dia nanome ny sasany statistika momba ny laharana sy ny valiny, ka ndao hanao ny matematika ary hikajiana ireo kaomisiona amin'ny toerana 8 eo amin'ny pejy, ka hatramin'ny laharana # 1 eo amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana:
Amin'izao fotoana izao, Trulia mitazona ny laharana # 1 ary Zillow mitazona ny laharana faha-2 - tsy mpiasan'ny trano sy tany tena izy. Saingy, ny zava-misy raha mitazona ny laharana faha-1 Trulia dia mitazona 56% ny tsindry amin'ireo karoka ireo - tombanana ho $ 41 miliara amin'ny fikarohana ao amin'ny Real Estate ho an'ny tanàna iray. Zillow dia eo ambanin'ny $ 10 miliara monja. Amin'ny fotoana ahatongavanao amin'ny gazety, ny Mercury News, eo ambanin'ny $ 3 miliara fotsiny ianao.
Mahaliana ahy ny antony avelan'ireo masoivoho sy broker ao amin'ity faritra ity handresy ireo lahatahiry… izy ireo afaka mifaninana fa tsy miankina amin'izy ireo. Tsy mendrika ve ny iray amin'ireo mpampindram-bola isam-paritra mandany roa tapitrisa dolara amin'ny marketing amin'ny motera fikarohana? Eny… eny.
Trulia dia mandresy in-4 ny fifamoivoizana amin'ity teny tokana ity! In-4! Rehefa manombatombana ireo orinasan'ny motera fikarohana sy mpanolotsaina ianao dia aza miala amin'io zava-misy io. Ataovy ao an-tsaina fa manomboka lafo dia lafo ny mifaninana amin'ireto teny mifaninana ireto sy ny karoka avo lenta. Miara-miasa amin'ny mpanjifa fototra izahay izao ary manosika azy ireo hiakatra ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana. Mila mahazo toerana # 1 ho azy ireo izahay handoavan'ireo fampielezan-kevitra feno ary hanome asa fanampiny ho anay. Goavana ny tsatoka ary ho tonga eo isika - saingy mila ezaka be izany.
Orinasa maro no faly rehefa eo amin'ny pejy voalohany izy… hadisoana lehibe. Tsy ampy fotsiny ny miseho ho an'ny teny lakile manokana amin'ny valin'ny motera fikarohana - ny fandresena amin'ireo fikarohana ireo no lakilen'ny fandresena amin'ny fandraharahana sy ny dolara ao ambadik'ireo fikarohana ireo. Atombohy ny kajy ny tamberim-bola azo ampiharina amin'ny teny lakile, ratios akaiky ary fidiram-bola. Mety ho hitanao fa mendrika handany vola an'arivony dolara amin'ny paikady marketing fikarohana. Raha tsy tsapanao izany - mety ho ny fifaninananao.
Araka ny nolazain'ny Raiko ahy… “Ny laharana faharoa dia ny voalohany resy fotsiny".
Tags: Brian GoffmanEdgeRankahoana no refesina klouthery fampandrosoanasocialbrosocialbropro
8 Nov 2009 tamin'ny 9:24 PM
Well Said - ny tanjona faratampon'ny tranokala na ny orinasam-pivarotana motera fikarohana dia ny hahatongavana amin'ny # 1. Izay no misy ny vola be…
9 Nov 2009 tamin'ny 5:48 PM
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny # 1 sy # 2 dia lehibe kokoa noho ny nieritreretako azy.
Manontany tena aho raha hijanona tsy miova izany sa hanomboka handika lavidavitra kokoa ny mpanjifa raha vao mihamatotra kely ny tsena…